izy ireo omaly ka anisan’ny tanjony ny hanome asa ho an’ny tanora amin’ny alalan’ny fanomezana fiofanana azy ireny, ny hanatsara ny lafiny ara-pahasalamana, ny hamerina ny lafiny fandriampahalemana ary ny fanomezana tany sy trano ho an’ny isan-tokantrano. Toerana efatra raha kely no efa hanatanterahan’izy ireo ny tetikasa ankehitriny dia ny eny Soaniedanana Pk 67, Ankazobe, Miarinarivo ary Behenjy. Tsy adinon’ireo mpikambana ny naneho ny heviny mikasika ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny. Mangataka ny fahasahian’ny kandida roa izy ireo rahampitso alahady alina ao anatin’ilay adihevitra karakarain’ny TVM mba ho sahy hiteny ny amin’ny fahavononan’izy ireo hiara-kiasa sy hanekeny ny voka-pifidianana aorian’ny datin’ny 19 desambra ho avy izao. Toraka izany koa ny fampitsaharana ny fifandranitana sy ny fifampihantsiana satria iray ihany ny Malagasy, hoy izy ireo ka tsy tokony hifandrafy ary firenena iray ihany no hasoavina.